Sedgefield, Western Cape, iNingizimu Afrika
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Diane
Isitudiyo esihle, sesimanje futhi esiyimfihlo kakhulu se-Bali esinechibi langasese/ubhavu oshisayo. Epulazini elimangalisayo lase-Equleni e-hamlet ethandekayo yase-Rondevlei imizuzu embalwa nje yokushayela usuka emabhishi amangalisayo nasezindaweni ezinhle zaseSedgefield & Wilderness. Itholakala kahle phakathi kwe-Knysna noGeorge. Amaminithi kude namabhishi ahamba phambili e-Garden Route, ukuhamba izintaba, i-MTB, ukugibela izikebhe nezindawo zokubukela izinyoni. Ama-Wonderful Farmers Markets nezindawo zokudlela ezikude yonke imizuzu.
Lesi situdiyo esihle nesiyimfihlo sitholakala yonke into oyidingayo ukuze uthole indawo yokuziphekela yothando.
Isimanjemanje futhi ihlotshiswe kahle ngombhede olingana nenkosi ubude namashidi kakotini waseGibhithe namathawula okugeza athambile.
Ivulandi lakho langasese linechibi le-cocktail eliguqulela kubhavu oshiswa ngokhuni. Ibhishi elincane elizimele elinamagumbi okuhlala elangeni. Ivulandi elimboziwe elinokukhethwa kwendawo yokosa inyama yegesi noma umgodi womlilo wezinkuni kanye nesidlo sangaphandle.
Kukhona indawo yokuphumula / ikhishi elihle, elinefriji ye-gas hob kanye ne-microwave. Ngendawo yomlilo yangaphakathi nezingubo zokulala zikagesi zakusihlwa kwasebusika.
Kanye ne-Smart TV ene-Netflix ne-Amazon Prime
Ishawa enkulu enhle ibheke engadini yangasese egcwele inyoni.
Hhayi nje ukuhlala, isipiliyoni sonke.
Ubuhle buhambahamba epulazini. Vumela izinja zakho nezingane zigijime ngokukhululeka eduze kwezindunduma ezisihlabathi ze-fynbos futhi ziphole echibini lethu noma echibini lemvelo.
Hamba ngezinyawo epulazini uye e-Wilderness National park futhi ujabulele uhambo lwe-Mole Rat & Rondevlei Bird-hide. Izulu elibuka izinyoni nabathwebuli bezithombe bayaphupha.
Chitha izikhathi zakusihlwa eduze kwama-marshmallows akho endabuko ayimfihlo. Bese cwilisa kubhavu wakho oshisayo wangasese ngaphansi kwengubo yezinkanyezi, ulalele imvelo namagagasi akude eshaya. Noma zungeza ngaphansi kwezihlahla esihlalweni esihle esilengayo.
Chitha izinsuku zemvula ubambe uthobile endlini yakho ethokomele ubukele i-Netflix noma i-movie ye-Amazon Prime.
Izinsiza ezifakiwe enkokhelweni:
*Ichibi langasese le-cocktail/ubhavu oshisayo oshiswe ngokhuni, ohlanganisa izinkuni namathawula okubhukuda.
*I-wifi yamahhala engavaliwe,
*ukusetshenziswa kwedamu lokubhukuda elikhulu,
*ama-condiments, kanye netiye, ikhofi yokuhlunga, ama-rusks, ubisi, amanzi ahlungiwe nama-marshmallows.
Ukuze uthole imali eyengeziwe:
*Izinkuni zomlilo nezibani zomlilo
*ibhulakufesi ilethwe endlini yakho encane
*amaphakethe okuzenzela epulazini
*Ukwehliswa kwe-Fynbos ne-champagne
*inkonzo yasekotishi, elondolo, ukuwasha izimoto
4.97 ·73 okushiwo abanye
4.97 · 73 okushiwo abanye
Itholakala eduze kwe-hamlet enhle yaseRondevlei ngaphandle nje kwedolobhana elihle laseSedgefield. Amaminithi ukusuka emabhishi, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili nezindawo zezikebhe kanye nezindawo zokudlela ezinhle, izimakethe kanye nezitolo. Ipulazi lethu lisendaweni ekahle enkabeni yeGarden Route phakathi kweKnysna neGeorge. Sisemngceleni we-Wilderness National Park futhi sinokubuka okungaphazamiseki kwezintaba, amachibi kanye nehlathi okwenza i-Garden Route ihluke kangaka.
Sisebenzisa ukuzihlola futhi kuhlale kukhona umuntu otholakala epulazini uma udinga noma yini.